Qalabka Gacanta Labaad - hissenglobal.com
Ciyaartoyda Gacanta Labaad
Hordhac: Iyada oo korodhka joogtada ah ee dadka Shiinaha, alaabta ay ku ciyaaraan waxay noqonayaan kuwo aad caan u ah. Sannadka 2020, wadarta guud ee iibka suuqa ee Shiinaha ayaa gaadhay 77.97 bilyan oo yuan. Alaabta gacanta labaad ee dib loo warshadeeyay ee Hissen Global ayaa sidoo kale gaadhay heerkii ugu sarreeyey ee cusub 500 tan sanadka 2020. Iyada oo nolosha dadka Shiinaha ay kor u kacday, tayada alaabta lagu ciyaaro ee gacan labaadka ah ee Shiinaha ayaa soo fiicnaanaysa oo sii fiicnaanaysa, iyo saamiga alaabta lagu ciyaaro ee gacan labaadka ah ayaa sidoo kale kor u sii kacaysa oo koraya sannadba sanadka ka dambeeya. Haddii aad raadinayso alaab-qeybiye la isticmaalay, fadlan nala soo xiriir, waxaan ku gaari karnaa sahayda xasiloon ee alaabta carruurtu ku ciyaarto iyo tayada la isku halayn karo.
kabo la adeegsaday
Faa'iidooyinka Hissen Global-gacan labaad ee alaabta lagu ciyaaro
Hissen Global waxa uu leeyahay kanaalo wax-ku-iibsi online ah oo qumman. Waxaan kala shaqaynaa Alibaba's Alipay mashruuca dib u warshadaynta alaabta gacanta labaad, sidoo kale waxaanu la shaqaynaa Shiinaha dib u warshadaynta alaabta elektiroonigga ah ee ugu weyn - Jacaylka Dib u warshadaynta ee mashruuca dib u warshadaynta dharka ee gacanta labaad. Alaabta gacanta labaad waa mid ka mid ah qaybaha iskaashiga, sahaydooda joogtada ah waxay hubisaa xasiloonida iyo tayada la isku halayn karo ee alaabtayada ceeriin.
Faa'iidooyinka ururinta internetka ayaa ah inaan la socon karno dib-u-warshadaynta dharka-gacanta labaad ee internetka iyada oo loo marayo adeegga daruuraha, faa'iidadani waxay hagaajisay awooddayada inaan ku tartanno warshadaha oo aan hubinno annaga. alaabta lagu ciyaaro gacanta labaad alaabta ceeriin waxay leedahay faa'iidooyin tayo sare leh. Waxa intaa dheer, kormeerahayaga QC ayaa hubin doona tayada alaabta carruurtu ku ciyaarto ka hor inta aan la xidhin, si loo hubiyo in alaabta carruurtu ay haystaan godad la'aan, ma wasakhayn, ma daadiyaan, ma jabin, IWM
Haddii aad rabto fiidyowga baadhista tayada ee kormeerahayaga tayada leh ee alaabta lagu ciyaaro ee gacan labaadka ah, fadlan la xidhiidh asxaabtayada kormeerka tayada.
Marka la eego in toyga-gacan-labaad uu yahay qayb caan ah oo caan ah, shirkadeena waxa ay xaddidday xadiga iibka ee baal kasta, halka shaqaalahayada iibku ay kuu habayn doonaan tiro macquul ah oo alaabta gacanta labaad ah si waafaqsan xaashida saamigaaga, oo dammaanad qaadi doonto waa faa'iido.
Professional Ka dib-iibka Service
Kooxdayada adeegga iibka kadib waxay ku guulaysteen amaanta macaamiil badan oo Afrikaan ah oo ay ugu adeegeen adeeg wanaagsan. Waxaan leenahay a faham qoto dheer oo ku saabsan warshadaha dharka ee gacanta labaad, waxaana bixin doonaa adeegyo ay ka mid yihiin wax soo saar toos ah iyo kormeer toos ah. Waxaad diyaar u tahay horumarka xiriir kasta oo hubi iyaga.
Wali ma kula xidhiidhaysaa macaamiisha boostada? Waxaan horey u leenahay kormeer toos ah! U dir su'aal degdeg ah si aad macluumaad u hesho.
Hissen Global waa alaab-qeybiye dhar-gacan labaad ah oo leh qaybaha ugu dhameystiran, tayada wanaagsan, iyo adeeg aad u wanaagsan Shiinaha. Waxaan sumcad wanaagsan ku leenahay Afrika, Koonfur-bari Aasiya, Bartamaha, iyo Koonfurta Ameerika iyo gobol ama dalal kale. Waxaan u hoggaansanahay nidaamka maaraynta tayada qumman iyo falsafada mudnaanta-macmiilka, ganacsiga dharka-gacan labaad ee Hissen Global ayaa u iftiimay in ka badan Dalalka 60 iyo gobolada aduunka. Ka faa'iidayso dadka dalalkan iyo kuwa aan wada shaqaynta leenahay.
Ciyaartoyga gacanta labaad ee Hissenglobal waa kuwo tayadoodu aad u fiican tahay oo aan cillad lahayn. Mid kasta si taxadar leh ayaa loo doortay, lammaanahayaguna aad buu ugu qanacsan yahay diyaarna u ah inuu iibsado marka xigta. "
"Waxaan horay uga soo iibsannay alaabada ay ku ciyaaraan gacan labaad ee Shiinaha, tayada ayaa aad uga xun ta Hissen Global."
"Ma qorsheynayno inaan ku dhigno alaabta lagu ciyaaro ee gacan labaadka ah, laakiin Josey, oo ah iibiye ka socda Hissen Global, ayaa nagu qanciyay inaan iibsano 20 baal, annaga oo la yaabnay, waxaa la iibiyay maalintii saddexaad! Aad baad ugu mahadsantahay Jose. Tonga waa wadan jasiirad ah oo qurux badan. Ku soo dhawoow Tonga!”
Ma doonaysaa inaad iibiso alaabta lagu ciyaaro? Waxaa laga yaabaa in faa'iido weyn ay ku sugto.
Riix halkan si aad u hesho xigasho!